Dhibaatooyinka degitaanka - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Dhibaatooyinka degitaanka
Maxaan samayn karaa, haddii aanan haysan lacag aan ijaarka ku bixiyo? Miyuu laga kireystuhu igu xiri karaa caymiska guriga? Goormee ayeey tahay in la joojiyo heshiiska guriga kirada ah? Waxaan soo ururinay jawaabaha su’aalo badan oo deegaan la xiriira.
Murannada deriska u dhexeeya
Nolol maalmeedka degista
Ma heli karo guri kiro oo raqiis ah.
Guryaha kirada ah ee bannaan oo ku yaal magaalooyinka waa weyn waa yar yihiin. Guryaha u dhow bartamaha magaaladu waa ka qaalisan yihiin kuwa kale. Waana sababta ay Finnish badan u deggan yihiin guryo yaryar. Qaar badan oo kalena waxey deggan yihiin meelo ka fog bartamaha magaalada ama degmooyinka kale oo u dhow iyagoo safar dheer u soo gala shaqada. Haddii aadan guri raqiis ah ka helin meesha aad dooneyso, ka fikir, in aad degi karto guri yar ama meel ka fog bartamaha. Deegaanno yaryar oo badan waxaa laga helaa guryo badan oo bannaan, qiimuhuna waa ka jaban yihiin.
Haddii aad qorsheynayso in aad deegaan yar uga soo guurto magaalo weyn, guri horay u raadi.
Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Guri kiro.
Waxaan diray codsiga guryaha kirada ah ee degmada, laakiin ma helin guri, inkastoo uu waqti ka soo wareegay.
Guryaha degmadu kuma filna dhammaan dadka codsada. Waxaa wanaagsan in guriga laga raadsado meelo badan. Waxaad sidoo kale la socotaa guryaha kirada ee gaarka loo leeyahay. Xusuusnow in aad waqtiga la jimeyso codsigaada, inta uu weli shaqeynayo. Haddii kale codsigu wuu dhacayaa. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Guri kiro.
Waxaan ka shakisanahay in lay takooray marki aan guriga raadinayay. Halkeen caawimaad ka helaa?
Sida sharcigu qabo laga kireystayaashu cidna kuma takoori karaan marka ay xulanayaan qofka ay gurigooda ka kireysanayaan tusaale ahaan asalkiisa, diintiisa ama jinsiyaddiiisa darteed. Si kastoo ay ahaatee laga kireystaha gaarka ah wuxuu xaq u leeyahay in uu isagu doorto qofka uu guriga ka kireysanayo, qasabna kuma ahan in uu sababeeyo xulashadiisa. Haddii shaki kaa galo in lagu takooray, waxaad talo weydiin kartaa tusaale ahaan adeegga macaamiisha ee Wakiilka Sinnaanta.
Soo sheeg takooriddaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Ma qasab in aan dallaalka siiyo lacagta dallaalka, marka aan guri kireysanayo?
Lacagta dallaalka waxaa inta badan bixiya laga kireystaha. Marka kaliya ee aad lacagta dallaalka adigu iska bixineyso waa marka aad heshiis qoraal ah oo guri-raadin la gasho dallaalka. Haddii heshiis shaqo u dirasho oo qoraal ah aadan sameynin, dallaalku lacagta dallaalka kaama dooni karo. Haddii uu isku dayo dacwad ayaad ka gudbin kartaa. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Dembiyada.
Dallaalku wuxuu doonayaa in aan lacag siiyo si aan guriga u arko. In aan bixiyo miyaa?
Waxaad xaq u leedahay in aad horay u soo aragto guriga , dallaalkuna lacag kaama dalban karo. Haddii ay ku heysato dhibaato la xiriirka dallaalka, waxaad la xiriir kartaa Talo-bixinta quutayaasha.
La-talintya quutahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dallaalku wuxuu doonayaan in aan lacag xajisasho ah ka bixiyo guriga kirada ah. In aan bixiyo miyaa?
Finland kama jirto lacagta xajinta guriga. Waxba ha bixinin illaa iyo inta aad ka heleyso heshiiska qoraalka ah ee kirada guriga. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan bixinta lacagaha kirada, tusaale ahaan dabaajiga kirada, ka eeg bogga InfoFinlandi Heshiiska kirada.
Laga kireystuhu wuxuu doonayaa in aan galo ceymiska guriga. Halkeen ka helayaa ceymiska guriga? Miyaan ka bixi karaa ceymiska hadhow?
Ceymiska guryaha waxaa dalkan Finland iibiya shirkado ceymis oo badan. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Nolol maalmeedka dalka Finland.
Waxaa wanaagsan in la galo ceymiska guriga, xittaa haddii aan lagu dalban heshiiska kirada. Ma wanaagsana in aad ceymiska guriga ka baxdo inta aad guriga deggan tahay. Haddii tusaale ahaan aad sababto qasaare-biyood aadanna ku jirin ceymiska guriga, waxaa qasab kugu noqonaya in aad adigu bixiso dhammaan qarashka dayactirka. Biilku wuxuu noqon karaa tobaneeye kun oo yuuro.
Maxey tahay in aan maanka geliyo ka hor inta aanan saxiixin heshiiska kirada?
Soo fiiri guriga, inta aadan kireysan. Hubi, in gurigu uu yahay wax jira, yacni in cinwaanka gurigu uu la mid yahay kan ku qoran heshiiska guriga. Xaqiiji sidoo kale in xaaladda gurigu ay tahay sidi laguugu sheegay. Hubi, in waxyaabaha heshiiska ku qoran sida shuruudaha iyo waqtiga fasixidda guriga. Waxaa kale oo wanaagsan in milkiilaha guriga ama wakiilkiisa lala qoro guriga iyo cilladaha jiri kara. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Heshiiska kirada.
Goormee ayeey tahay in la bixiyo dabaajiga guriga?
Bixi lacagta dabaajiga ah marka aad hesho heshiiska kirada oo qoraal ah. Laga kireystahu wuxuu u qarriri karaa lambar akoon, oo aad ku shubeyso lacagta dabaajiga. Waxaad sidoo kale akoon gaar ah bangiga uga furan kartaan dabaajiga kirada. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Heshiiska kirada.
Laga kireystuhu wuxuu soo jeediyay, in aan heshiiska kirada u galno af ahaan. Heshiiska afku ma ku filan yahay?
Heshiiska kirada markasta ka dhig mid qoraal ah. Waxaad sidan ku caddeyn kartaa waxyaabaha aad ku heshiiseen haddii dhibaato ka timaado. Si wanaagsan u xafid heshiiska kirada.
Cillado xoogaa ah ayuu gurigu leeyahay. Laga kireystuhu dib miyuu iiga dalban karaa in aan dayactiro cillado aanan sababin.
Waxaa kuu wanaagsan in aad la qorto cilladaha guriga laga kireystaha, marka uu xiriirka kiradu billowdo. Waxaad sidoo kale qaadi kartaa sawirro ay ka muuqdaan cilladahan. Sidan waxaad uga badbaadi kartaa in aysan qasab kugu noqon in aad qaaddo mas’uuliyadda cillado aadan sababin.
Waxaan fasaxay guriga, laakiin laga kireystuhu wuxuu dalbanayaa in aan bixiyo kirada illaa iyo inta uu ka helayo kireyste cusub. In aan bixiyo miyaa?
Haddii aad heysato heshiiska kirada oo shaqeynaya waqti aan cayineyn, waqtiga aad guriga fasixi karto waa hal bil oo buuxda. Waqtigu wuxuu ka billaabanayaa dhammaadka bisha aad guriga fasaxday. Marka waqtiga fasixiddu uu dhamaado laga kireystuhu kaama dalban karo kiro. Heshiiska kirada ee waqtiga cayiman kama bixi kartid inta uu shaqeynayo. Haddii loo baahdo waxaad isku dayi kartaa in aad wadaxaajood ka gasho dhamaanshaha heshiiska kirada waqti hore. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Heshiiska kirada.
Waxaan heystaa heshiis aan waqtigiisu cayinnayn. Waxaan fasaxay guriga 2da Juunyo Laga kireystuhu wuxuu iga dalbaday in aan bixiyo xittaa kirada bisha Luulyo. In aan bixiyo miyaa?
Haddii heshiiskaada kirada wax kale ku qorneyn, waqtiga fasixidda waxaa sida sharcigu qabo laga xisaabinayaa dhamaadka bil buuxda oo inti lagu jiray bishaas aad guriga fasaxday. Haddii aad fasaxday guriga 2da Juunyo, waqtiga fasixiddu waa 30ka Juunyo, wuxuuna soconayaa hal bil. Yacni waa in aad bixisaa kirada bisha Luulyo. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Heshiiska kirada.
Ma heysto lacag aan kirada ku bixiyo. Maxaan sameyn karaa?
Sida ugu dhaqsaha badan ula xiriir laga kireystaha kalana xaajoow waqti dheeraad ah oo aad lacagta ku bixiso. Soo ogow, in aad dib u dhigi karto bixinta biilasha kale, si aad kirada isaga bixiso. La xiriir sidoo kale bangigaada oo ka ogow, in aad deyn ka heli karto, si aad kirada isaga bixiso. Ka ogow KELA’da in aad xaq u leedahay kaalmada kirada ama kaalmooyin kale. Waxaad sidoo kale talo iyo caawimaad weydiisan kartaa talo-bixinta deynta, xafiiska sooshalka iyo la taliyaha degitaanka ee degmada ama shrikadda guriga kirada ama ururka ama tusaale ahaan Mu’asasada Damiinta. Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogagga InfoFinland Kaalmada ijaarka iyo Dhibaatooyinka dhaqaale.
Furriin dhacay dartiis waa in aan ka guuro gurigeyga. Waxaan sidoo kale ka baqanayaa, in aan lumiyo ogolaanshiyaha joogitaanka dalka. Maxaan sameyn karaa?
Bogga InfoFinlandi Guri kiro waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan, sida aad u raadsan karto guri cusub.
Furriinku wuxuu saameyn ku yeelan karaa ogolaanshaha joogitaankaada, haddii aad heysatay sharci ku meelgaarka ah oo aad ku qaadatay xiriir qoys. Xaaladaha qaar marka lagu jiro waxaa suurtagal in laguu sii wado sharciga, haddii aad xiriir adag ku leedahay Finland, sida shaqo. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka.
Laga kireystuhu wuxuu iigu hanjabay, in guriga layga saarayo buuq dartiis.
Haddii aad si joogto ah u jebiso xeerarka nidaamka ee guriga, laga kireystuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu heshiiska burriyo. Isku day in aad arrinta kala heshiiso laga kireystaha ka hor inta aan heshiiska la burrin. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa tusaale ahaan xarunta Heshiisiinta Deriska.
Waa in aan ka guuraa guriga, mana helin guri cusub. Maxaan sameyn karaa?
Degmooyinka Finland waxey adeegyo u fidiyaan dadka guryo la’aanta ah. Adeegyadan waxaa loogu talagalay dadka ku leh Guri degmo ee gudaha Finland. Haddii aad guri la’aan noqoto, la xiriir xafiiska sooshalka degmadaada ama xarunta sooshalka. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Guri la’aanta.
Deriska ayaa qeylinaya. Maxaan sameyn karaa?
Deriskaadu qeylo ma sababi karaan tusaale ahaan habeeni saqda dhexe. Haddii deriskaadu uu marar badan aad u jebiyo xeerarka nidaamka, waxaad la xiriir kartaa maareeyaha guriga ama laga kireystaha.
Deriskaygu wuxuu si joogto ah iiga cawdaa qeylo. Cod noocee ah ayaa loo ogol yahay guriga dabaqa?
Xeeerarka nidaamka ee shirkadda guriga waxaa lagu sheegaa waqtiga loo baahan yahay in la yareeyo buuqa guriga. Inta badan waxaa xeerarka nidaamka laga helaa guryaha dabaqa ah meesha laga soo galo. Intii lagu jiro saacadaha buuqa la yareeyo lama sameyn karo cod dheer, tusaale ahaan lama garaaci qalabka muusikada ama lama dhegeysan karo muusik cod dheer, laakiin nolosha caadiga ah waa la ogol yahay.
Halkee ayaan caawimaad uga helayaa murannadda deriska igala dhexeeya?
Haddii uu muran dhex maro adiga iyo deriskaada, oo aadan dhexdiina ka xallin karin, waxaad caawimaad ka raadsan kartaa xarunta Heshiisiinta Deriska ama maareeyaha guriga. Heshiisiinta deriska waxaa loola jeedaa, deriska oo wada hadlaya iyo wada hadalka oo uu dhex-dhexaadinayo dhex-dhexaadiye madaxbanaan. Waxaa kulanka looga heshiin karaa sida arrinta loo xallinayo. Heshiisiintu waa lacag la’aan. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga xarunta Heshiisiinta Deriska.
Warbixin ku saabsan dhexdhexaadinta dersikaFinnish | Ingiriis
Maxaan sameynayaa, haddii aan furaha guriga ku hilmaamo?
Inta badan shirkadaha guryuhu waxey shirkadda dayactirka ama maareeyaha guriga ku keydiiyaan nuqulka furayaasha waxeyna guriga kaaga furayaan lacag. Albaabka guryaha dabaqa ah agtiisa waxaa ku qoran lambar telefoon, oo aad wacan karto marki xaaladdan oo kale ay kugu dhacdo.
Sideen u habeyn karaa qashinka?
Finland qashinka waa la kala habeeyaa tusaale ahaan qashinka cuntada, baakadda, dhalada, birta, qashinka halista ah iyo qashinka isku daran. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Qashinka iyo dib u isticmaalidda.
Maxey tahay in aan ku xisaabtamo, marka aan isticmaalayo sawnada gurigayga?
Waxba ha dul saarin waligaa dabka sawnada hana u isticmaalin bakhaar ahaan sawnada ama meel dharka lagu qallajiyo, haddii kale dab ayaa ka kici kara. Dami marwalba dabka sawnada ee korontada ku shaqeeya isticmaalka ka dib. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Nabadgelyada guriga.
Maxaan sameynayaa, haddii tubada biyuhu ay biyo deyneyso?
Wac shirkadda dayactirka ee ay shirkadda gurigaadu heshiiska kula leedahay. Shirkadda dayactirku waxey sameyn kartaa dayactiro yaryar, sida dayactirka tubada biyaha ama furitaanka biyo-mareenka.
Gurigayga waxaa ka jira dhibaatooyin qoyaan ama cillado kale. Sideen wax u qabtaa?
Horay kala xiriir shirkadda dayactirka, maareeyaha guriga ama laga kireystaha. Waa muhiim in cilladaha deg deg laguo hagaajiyo inta aysan sii xumaanin.
Marka aan cuntada karineyno, jikada waxaa soo gala qoyaan badan. Maxaan sameyn karnaa?
Haddii uusan gurigaadu laheyn hawo-beddel mashiin ku shaqeeya, fur daaqadaha kaddibana hawada ka saar. Muhiimad gaar ah ayeey tani leedahay, haddii aad ogaato, in marka aad cuntada karineyso ay daaqadaha hawo biyo wadata ama qoyaan uu ku aruuro. Isticmaal hawo-saarka dhardhaarada, marka aad cuntada karineyso. Hubi, in waalasha hawo-saarku ay furan yihiin. Haddii aad qasaare u geysato guriga, waa in aad magdhowdaa qasaaraha. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha.
Halkee ayaan caawimaad iyo talooyin uga helayaa arrimaha deegaanka?
Waxaa jira goobo badan oo aad caawimaad uga heli karto arrimaha deegaanka. Ka aqriso wixi dheeri ah bogga InfoFinlandi Guri kiro.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 30.04.2021 Boggan war-celin ka soo dir